बालबालिकामा किन बढ्दै छ कोरोना संक्रमण ? - Janadesh Khabar
बालबालिकामा किन बढ्दै छ कोरोना संक्रमण ?
बालबालिकालगायत सबै उमेर समूहलाई संक्रमित पार्न सक्ने कोरोना भाइरसको प्रजाति नेपालमा देखापरेको छ । आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहकालाई असर पार्न सक्ने प्रजाति भेटिएको भन्दै सचेत हुन भनेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले विज्ञप्तिमार्फत् डेल्टा भेरियन्ट, कप्पा भेरियन्ट र अल्फा भेरियन्ट गरी तीनवटा प्रजातिका कोरोना भाइरस भेटिएको उल्लेख गरेका छन् । संक्रमणको जोखिम बढिरहेको भन्दै सम्भावित तेस्रो लहरको खतरा औल्याएका छन् ।
अहिलेको नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको भेरियन्ट धेरै संक्रामक छ। सबै उमेर समूहमा यसले प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
पहिलो लहरमा बालबालिकामा संक्रमणको फैलावट तुलनात्मक रुपमा कम थियो। दोस्रो लहरमा अलि बढी देखियो। तेस्रो लहरमा बढ्ने सम्भावना किन पनि बढी छ भने हाम्रो बानी परिवर्तन गर्ने कुरा, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कुरा, मास्कको सही प्रयोग, दुरी कायम गर्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने विषयमा यो कुरा पालना बालबालिकाबाट राम्रोसँग नहुन सक्छ।
अर्को हामीले अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइरहेका छौं। नेपालमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले खोप लगाउन मिल्दैन।
व्यवहार परिवर्तनका कुरा र खोपको कारणले पनि बालबालिकाभन्दा युवा वर्ग बढी सुरक्षित रहनसक्ने देखिन्छ। त्यसैले बालबालिकामा बढी संक्रमण बढी हुनसक्छ।
तर, यसको अर्थ बालबालिका बाहेकका उमेर समूह सुरक्षित छ भन्ने होइन। कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेकाहरुमा पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन अझै बाँकी छ। केही समय अझै लाग्छ।
यस्तै पहिलो र दोस्रो लहरमा जे जति तयारीहरु गर्‍यौं। त्यो तयारीका सन्दर्भमा स्वास्थ्यकर्मी वा अस्पतालको पूर्वाधारको तयारी बालबालिका बाहेकका व्यक्तिहरुका लागि लक्षित गर्‍यौं।
जसले गर्दा बालबालिका धेरै संक्रमित हुँदा हामीले बढी तयारी गर्नुपर्छ। अस्पतालमा बालबालिका लक्षित तयारी गर्ने समय अहिले भएको हुनाले हामीले बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार परिवर्तनसँगै अस्पतालहरुमा तयारी गर्नुपर्छ।
बालबालिकालाई संक्रमण नसार्न गर्नुपर्ने व्यवहार हामीले गर्नुपर्छ। यो अवस्था अरु देशहरुमा पनि छ। त्यसैले नेपालमा पनि यस्तो तयारी गर्नुपर्छ।
–(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले कोरोना ब्रिफिङका क्रममा दिएको जानकारी)
१४ साउन २०७८, बिहीवार १४:१४ बजे प्रकाशित
अलास्कामा ८.२ म्याग्नेच्युडको भूकम्प